Inselelo kwiChiefs ngabadlali ezobaxosha
UKUDLALA kahle kwi-Africa Cup of Nations kukaTeenage Hadebe waseZimbabwe kumenze wathola iqembu elisha eTurkey
Mthokozisi Mncuseni | July 16, 2019
UKUGQAMA kwesitobha seseZimbabwe uTeenage Hadebe kwi-Africa Cup of Nations (Afcon) ka-2019 ese-Egypt, kupholisele iKaizer Chiefs ngekhanda elinzima kwazise imelwe ukunquma ngokushesha ngezikhala ezimbili ezisele zabadlali okumele babhaliswe kodwa abangewona umsinsi eNingizimu Afrika.
Umbuzo omkhulu uthi kubadlali abathathu abasele kulesi sibalo uma bengabalwa abathathu abasanda kubasayinisa, yibaphi ababili abazokhonjwa abafika ngayo kuleli qembu eliholwa ngu-Ernst Middendorp.
Njengamanje iChiefs inabadlali abayisishiyagalombili emabhukwini ayo abangebona abokuzalwa kuleli. Yize kunjalo bayisikhombisa okufanele ikhethe kubona abahlanu ezobabhalisela isizini entsha.
Umthetho wePremier Soccer League (PSL) uthi iqembu lingabhalisa abadlali abahlanu kuphela abangebona abokuzalwa eNingizimu Afrika. UWillard Katsande noKhama Billiat sebehlale ngokwanele kuleli ukuthi sebengabhaliswa njengabaseNingizimu Afrika.
Lokhu kubanga ukuthi uLeonardo Castro, Dax Andrianarimanana noDaniel Akpei bahlale bejeqeza. Imbangela yalokhu ukuthi uHadebe usenekhaya elisha eTurkey kanti uLazarous Kambole, James Kotei noSamir Nurkovic kusobala ukuthi bazobhaliswa kwazise basayiniswe muva nje. Yize uKearyn Baccus engowase-Australia kodwa ungowokuzalwa eThekwini okumenza abhaliseke njengomdlali wakuleli.
Konke lokhu kubenza bahlale beqalaza o-Akpei obekwi-Afcon neNigeria, uDax naye obekwi-Afcon neMadagascar noCastro osekuvele kaningi ukuthi iChiefs ihlela ukumfaka ohlwini lwabadlali abadayiswayo.
Koluka-Akpei udaba, iningi labalandeli beChiefs alimethembi kwazise uvamise ukwenza amaphutha asobala kanti kulindeleke ukuthi abuyele esikimini uma elulama * -Itumeleng Khune obukeka ezosibanga noBruce Bvuma kule sizini ezoqala.
Kusengenzeka futhi bagcine behamba bobabili o-Akpei noCastro ngoba nangasekupheleni kwesizini edlule uMiddendorp ubengazifihli izinhloso ngalaba badlali. UCastro ubengasadlaliswa kanti * -Akpei ubevinjiswa ngoba engekho uKhune kodwa ehlale emgigiyela uMiddendorp lo nozinti ngenxa yamaphutha asobala.